Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » PLATFORM USING ZONE » » Linux Platforms » » UBuntu » Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem]
1 Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 18th November 2009, 5:20 pm
ကျနော် အခု Ubuntu Linux ကိုသုံးပါတယ်...ဒါပေမယ့် ZawGyi Font Install လုပ်ပါတယ်....Terminal မှာ Install လုပ်ပီး Restart ချခိုင်းပါတယ် ... ဒါပေမယ့် မြန်မာစာဖေါင့်က မပေါ်ပါဘူး....ကျနော် Install လုပ်တာလည်း မှားတာ ဖြစ်ချင်ရင် ဖြစ်မှာပါ...ကျနော် ကို Install လုပ်နည်း လေး နဲ့ အသုံးပြုပုံလေး ကို ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်.........အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
2 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 19th November 2009, 7:38 pm
ရှင်းပြချင်တယ် အချိန်မရလို့ ပြန်တော့မှာမို့လို့ပါ။
တခြား သိတဲ့သူရှိရင်တော့ ဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်ကတော့ စနေ တနင်္ဂနွေကျရင် ပြန်လာပါမယ်။
ps# မေးထားတာကို ပြန်မဖြေဘူးထင်မှာစိုးလို့ အရင် reply လုပ်ထားတာ။ ပြီးမှ ဒီပိုစ့်ကို ဖျက်တော့မယ်။
3 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 20th November 2009, 7:58 am
$ƴǩǾ wrote: ရှင်းပြချင်တယ် အချိန်မရလို့ ပြန်တော့မှာမို့လို့ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို ...အားတဲ့အခါ လေးသေချာလေး ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်....ကျနော် ဒီဖိုရမ် ၀င်ခါနီးကျရင် မြန်မာလိုမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်...တစ်ခြားကွန်ပျူတာ နဲ့ သုံးနေရလို့ပါ....ကူညီပေးပါ ... [You must be registered and logged in to see this image.]
4 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 21st November 2009, 12:20 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 69
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-08-16
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 112
ubuntu တွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူဘူးဗျ
တစ်ခုမှာ Instll လုပ်လို့ရရင် နောက်တစ်ခု မှာ အဆင်ပြေချင်မှ ပြေတယ်
အစ်ကို သုံးနေတဲ့ Ver: က ဘာလဲမသိဘူးခင်ဗျ
5 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 21st November 2009, 3:23 pm
သျှန်ဝေ wrote: ubuntu တွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူဘူးဗျ
အစ်ကိုရေ Ubuntu 9.10 - The Karmic Koala Dvd Version ပါ.....
6 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 21st November 2009, 7:57 pm
ဟီး [You must be registered and logged in to see this image.]
7 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 21st November 2009, 8:04 pm
ကျနော်လည်း ရေးပေးဖို့ အချိန်မရလို့ပါဗျာ။
အဲဒါကြောင့် ကိုသျှန်ဝေ နဲ့ လွှဲထားတာ။ ဟီး။
ကို သျှန်ဝေ ဂျစ်တယ်နော်။ ကူညီလိုက်ပါ။ ကုသိုလ်ရတယ်။
8 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 21st November 2009, 8:15 pm
ဂျစ်တာပေါ့ ယောက်ဖ ကြီးရ
ကူညီရမှာပေါ့ ဟိုအစ်ကို ကို
ဒါနဲ့ ဆိုက်ကို ရေ စကားမစပ်
နီ ညီမလေး နှစ်ယောက်လုံးနေကောင်းလားကွ
တူတို့ ဘဲဘဲ ကမေးတယ်လို့ [You must be registered and logged in to see this image.]
9 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 23rd November 2009, 5:26 pm
Terminal မှာ gksu nautilus/usr/share/fonts/truetype
လို့ရေးပြီး enter နှိပ်လိုက်ပါ
folder တစ်ခုထွက်လာရင် အဲဒိထဲကို fonts တွေ cope / paste လုပ်လိုက်ပါ
အဲကောင်လေး ဒေါင်းပြီး အထဲက deb ဆိုတဲ့ဟာလေးကို double click လုပ်ပြီး ဆက်လုပ်သွားယုံဘဲတဲ့
Last edited by သျှန်ဝေ on 23rd November 2009, 10:05 pm; edited 1 time in total
10 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 23rd November 2009, 5:37 pm
နောက်မသိတာရှိရင် [You must be registered and logged in to see this link.] မှာဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
သူမူရင်း က ကျွန်တော်တို့ထက် ပိုသေချာလို့ပါ
ပြီးတော့ ဒီပိုစ့်ကိုလဲ ဆိုက်ကိုက မ လိုသာဖြေပေးရတာပါ
ကျွန်တော်သိတာက လဲ Red Hat Enterprise5ပါ
နည်းနည်းတော့သိတယ် ubuntu နဲ့ဆိုင်ရင်တော့
11 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 26th November 2009, 3:44 pm
သျှန်ဝေ wrote: နောက်မသိတာရှိရင် [You must be registered and logged in to see this link.] မှာဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို ရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်....ကျနော် လည်း စမ်းကြည့်လိုက်အုံးမယ်....အစ်ကို ပေးထားတဲ့ ဆိုဒ် က ဖွင့်လို့လည်း မရဘူးဗျ... [You must be registered and logged in to see this image.]
12 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 26th November 2009, 6:30 pm
ကို သျှန်ဝေ တို့ကတော့ လုပ်ပြီ။ Link ကြီးမှားပေးသွားတယ်။
13 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 26th November 2009, 6:32 pm
$ƴǩǾ wrote: ကို သျှန်ဝေ တို့ကတော့ လုပ်ပြီ။ Link ကြီးမှားပေးသွားတယ်။
ဟုတ်အစ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
14 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 26th November 2009, 8:27 pm
အဲဒီလင့်ကိုသွားကြည့်ပါအုံးအစ်ကို ။ Ubuntu အတွက်လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာဆိုက်တစ်ခုပါ ။
15 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 27th November 2009, 8:27 pm
16 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 28th November 2009, 7:01 am
kyawmin wrote: အဲဒီလင့်ကိုသွားကြည့်ပါအုံးအစ်ကို ။ Ubuntu အတွက်လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာဆိုက်တစ်ခုပါ ။
သျှန်ဝေ wrote: ကျေးဇူး တိုကျော်မင်း
အစ်ကို မြန်မာလိုတော့ ပေါ်သွားပါပီ...ဒါပေမယ့် မြန်မာလိုရိုက်ချင်ရင် ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲမသိဘူး..... [You must be registered and logged in to see this image.] ကူညီကြပါအုံး
17 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 5th December 2009, 5:34 pm
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 42
Hi I'manewbie to Ubuntu
First, you have to download the file firstly,
then place on Desktop or else you want .. then extra here the file. you'll see the zawgyi folder
then open "terminal"
you have to change directory to place where zawgyi folder is.
if you'd extracted zawgyi in zawgyi, type..
you'll be within the zawgyi folder
then.. continue by typing...
sudo python zawgyi-keyboard-install.py
then.. you'll see the construction
ှI hope that it'll be okay
18 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem] on 5th December 2009, 6:47 pm
Oh .. I forgot to say that how to change Keyboard Layout in Ubuntu
first , go to Preferences > Keyboard >
at Layout, you have to add Myanmar Keyboard Layout
then, you've to setakey ( like Ctrl + Shift in Window ) , you can change that key at Layout Option.. I hope that you can catch you I want to mean
Later, I could discuss fully more than now
19 Re: Ubuntu မှာ ZawGyi Install လုပ်မရလို့..... [Problem]